2011 Black Friday စပယ်ရှယ် သူခိုးဈေးများ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Steal Deal » 2011 Black Friday စပယ်ရှယ် သူခိုးဈေးများ..
2011 Black Friday စပယ်ရှယ် သူခိုးဈေးများ..
Posted by kai on Nov 25, 2011 in Steal Deal | 28 comments
ဒီနေ့ကBlack Friday နေ့ပါ..။ နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာရဲ့နောက်ဆုံးအပါတ် သောကြာနေ့ကိုBlack Friday နေ့လို အမည်ပေးပြီး.. ဈေးလျှော့ရောင်းကြ..၀ယ်ကြတယ်ပေါ့..။
အဲဒါ.. လူတော်တော်များများက.. ၂၄ရက်နေ့ညနေကတည်းက..စောင်တွေခေါင်းအုံးတွေနဲ့..ညအိပ်ပြီး မနက်ဝယ်ဖို့ စောင့်ကြပါတယ်..။
အောက်လင့်တွေကနေ ..ကြည့်ကြည့်ကြပါ..။ Canon EOS 5D Mark IIမှ လင်စ်ပါပြီး ၂၈၀၀ကျတယ်ပေါ့..။ အခွန်တွေတော့ မပါသေးဘူးပေါ့လေ…။
Canon EOS 5D Mark II Black 21.1 MP 3.0″ 920K LCD Digital SLR Camera w/EF 24-105mm f/4L IS USM Lens
Item #: N82E16830120307
ယူအက်စ်နေတဲ့.. ရွာသူားတွေအတွက်.. လိုက်မွှေထားတာလေး တချို့.. တင်ပေးလိုက်ပါကြောင်း..။
Macy’s Stores are offering $10 off $25 on all Sale & Clearance Apparel and Select Home Items (excludes specials & super buys) with this Printable Coupon valid through November 26th until 1pm local time. Thanks foodisyum
30% off at COACH OUTLETS to 11/27 with printable coupon
30% Coach Factory Coupon Print email and bring it to your local Coach factory Store fora30% discount in store on everything, valid at any Coach Factory store. ( November-27-2011 )
Acer Aspire AS5755-9401 Notebook Intel Core i7 2670QM(2.20GHz) 15.6″ 4GB Memory DDR3 1066 500GB HDD 5400rpm DVD Super Multi Intel HD Graphics 3000 – $599.99
လိုချင်ရင်.. ၀ယ်ပေးမယ်လေ..။ ပို့ခနဲ့.. အခွန် ၁၀ရာခိုင်နှုန်း ထပ်ပေါင်းပေးပေါ့..။
ပို့ခက.. တပေါင် ၇ဒေါ်လာလောက် ကျတယ်..။
သဂျီး သဂျီး …..
ဘာသခိုးဈေးလဲ … ဘာမှ သခိုးမဈေးဝူး….
သဂျီး တင်ထားတဲ့ ဖိုက်ဒီ မာ့ခ်တူး ၂၄-၁၀၅မမ က ၃၂၉၉ တောင်ရှိတာ
အဲ့သည့် spect အတိုင်း အမေဇုံမှာ ၀င်ကြည့် ၂၉၉၉ ပဲရှိတယ် …
ခရီးရောက်မစိုက်ကြီး အတော် နောက်တဲ့လူ
၀ှူး မောထှာ …
အဲဒီမှာ.. ပိုက်ပိုက်ပြထားတယ်လေ.. Canon EOS 5D Mark II Black 21.1 MP 3.0″ 920K LCD Digital SLR Camera w/EF 24-105mm f/4L IS USM Lens
၂၈၀၀ တဲ့..။ checkout လုပ်လိုက်မှ.. အဲဒီဈေးပြတာ…။
အေဆာ.. အိုင်၇ လည်း.. ၆၀၀ ပဲရှိတယ်..။
Apple MC540LL/A – 8GB iPod Touch w/ Camera (4th Gen) (Newest Model)
ဟင့်အင်း သည်က ကြည့်တာတော့ ၃၂၉၉ ပဲပြတယ်.. …
တော်ဘာဘီ ….ယူလော့ပါဝူး ဖိုက်ဒီလဲ …
၀မ်းဒီ အိပ်စ် ထွက်မှပဲ ၀ယ်ကိုင်တော့မယ်…
ဟိုဘက်မှာ စပွန်စာ ကိစ္စ သွား စစ်ကူပေးလိုက်ဦးမယ်သဂျီးရေ့
(ကင်မလာ နှင့် အယ်လ်စီးရီးစ် လန်းစ် ၁ဆင်စာ စပွန်ဆာပေးချင်သော
သဂျီး၊ နော်တို့ ရွာက လူတွေဆို သာခို ဈေးဆို သိပ်စိတ်ဝင်စားတယ်၊ အားကျအောင်လုပ်နဲ့။
ီဗီဇာ ရလို့ကတော့ ပြေး ၀ယ်လိုက်ချင်ပါ့။
ှုသူကြီး ကောင်းဘူး သူများတွေ သ ရေ ကျအောင်လုပ်နေတယ်…
ဒီမှာ acer i3 , 14″ notebook ကို ဒေါ်လှ ၆၂၀ တဲ့ .. သရေကျပြီး ပြန်လာတာ .. အခု i7 ကို ဒီဈေးဆိုတော့ ညအိပ်တန်းစီ ၀ယ်ရလည်း ၀ယ်ပျော်မယ်ထင်တယ်။
ပျွတ်စ် ပလပ်စ် ပျွတ်စ် ပလပ်စ်
အင်တာနက် ဆိုင်ထဲမှ ဝန်ထမ်းကောင်မလေး က ထိုအသံများ ကြားသဖြင့် ၊ ဘာများ ဖြစ်ပါလိမ့် ဟု ၊ စက်များကို လိုက်လံ စစ်ဆေးရာ ၊ ထောင့်တစ်နေရာတွင် ထိုင်ရင်း ၊ ယခု ပို့ စ်ကို ဖတ်ရင်း ၊ သွားရည် တွေ ကျနေသဖြင့် လျှာဖြင့် ရပ်နေသူ “ မောင်ပေ ” အား တွေ့ ရှိသွားလေသတည်း ။
အားကျလိုက်တာနော် သဂျီးကို ၊ လိုချင်လိုက်တာ ၊ ဝယ်ချင်လိုက်တာ …ပျွတ်စ် ပလပ်စ် ပျွတ်စ် ပလပ်စ်
သဂျီးကို ၊ လိုချင်လိုက်တာ ၊ ဝယ်ချင်လိုက်တာ …ပျွတ်စ် ပလပ်စ် ပျွတ်စ် ပလပ်စ် …………………… :mad:
အောင်မလေး လုပ်ကြပါအုံး ကိုပေက တို့သဂျီးကို လိုချင်လို့ ပျွတ်စ် ပလပ်စ် ပျွတ်စ် ပလပ်စ် တဲ့။
အင်း…ကိုယ်တို့ သိသင့်တဲ့ အကြောင်းလေးပါပဲ။
တင်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
door buster deal ရမှ ကိုက်တာပါဗျာ။ ကျန်တာတွေကတော့ ပြောသလောက် ဟုတ်ပါဘူး။ ရောင်းမစွံလို့ ကျန်တဲ့ပစ္စည်း ဈေးထပ်လျှော့မှ ဝယ်တော့မယ်။ ကျနော်က အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းကို သိပ်brandအစွဲရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ဈေးကွက်ထဲ နာမည်ရထားတဲ့ တံဆိပ်ဆို ဈေးတန်ရင် ဝယ်မှာပဲ။ တိုရှီဘာ လက်ပ်တော့တလုံး မနစ်တုံးက ခံရပြီးပြီ။ ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ တခုမှ မကျန်တော့လို့ ရရာဝယ်လိုက်တာ နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာ ဈေးပိုပေါနေတယ်။ ကိုယ်က ဒါမှဒါ၊ ဒီအရောင်မှ ဒီအရောင် ဖြစ်နေရင်တော့ တမျိုးပေါ့နော်။
မိန်းမတွေကဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း၊ ကျနော်တို့အတွက်ကတော့ အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းများ သွားရည်ယိုပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ :surprised:
Dell Home has Dell Inspiron 15R i5 4GB Notebook Laptop for $479.99 Shipped
– Inspiron i5-2430M, 4GB DDR
– 500GB Disk, 8x CD/DVD Burner
– 15.6″, Windows 7
1. Dell Home Price : $579.99 Shipped
2. Use coupon code RXCC8C4951CWM8 to get this for $479.99 shipped
Bestbuy.com has Toshiba Canvio Basics 320GB External USB 2.0 Portable Hard Drive for $29.99 Shipped
Staples.com has the Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Telephoto Zoom Lens foragood price.
1. Staples Price : $179.99 Shipped
2. Use coupon code 52237 to get $80 off
Final Price : $99.99 Shipped
Buy.com through eBay has the Canon EOS Rebel T3i Digital SLR Camera with Canon EF-S 18-55mm IS II lens for $649.99 Shipped
အမငီး.. သဂျီးရယ်… ခုလောလောဆယ်တော့ သောကြာစနေရှယ်သူခိုးဈေး
မသွားနိုင်ဘူး။ သဂျီး လက်နက်ကြီးနဲ့ ထုလိုက်တာ.. မဆီနဲ့ မဆိုင်တဲ့
ကိုရင်တို့ ကတုံးလေးတွေ ပါသွားလို့ ရွာထဲကို ခုမှ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်
ပြန်ဝင်လာရတာ… လိုင်းနှေးရတဲ့ ကြားထဲ ဂျောင်ဂျိုးက ၀င်လာတော့
ဒီကွန့်မန့်တော့ မန့်လိုက်ပီ… သိချင်တာလေးက လက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်ထုထားအုန်းမှာလား..
နှစ်လုံးပြူးသုံးမသုံး သိချင်ပါဒယ်..။ ပြန်ဖွင့်ရင်လည်း မြန်မြန်ပြန်ဖွင့်ပေးပါ..
သံယောဇဉ်… သံယောဇဉ်.. ဒီသံယောဇဉ်.. (လေးဖြူသီချင်းလေးဖွင့်ရင်း စောင့်နေကြောင်းပါ)
ကျုပ်ကိုရင်တွေပါ.. ထိကုန်တော့.. ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ..။
သံတွဲသားတွေ.. ပစ်စာတိုင်စာတွေပဲ ရွေးဖျက်တော့မယ်..။
ကိုရင်တို့လို မေတ္တာသမားတွေပါ… ထိတယ်.. ဟတ်စ် ထိတယ်…
ခုဆို နှစ်ရက်လောက်ပျောက်သွားတဲ့ ကိုရင့်ကို ရွာသူလေးတွေ
ဆီနဲ့ အမျိုးတော်လား မသိဘူး။ အပေါက်က မရှိလိုက်နဲ့ ထွက်လာမယ်ဆိုတာချည်းဘဲ။
စနှိုက်ပါ နဲ့ ပစ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆက်တိုက်ပစ်ရမဲ့သဘောရှိတယ်နော။
တစ် နေရာယူ။ နှစ် အဆင်သင့်ပြင်။ သုံး သဂျီးရေ စနိုက်ပါနဲ့ ထုလို့ ရပီ။ ဟိုမှာတက်လာပီ။ လက်နက်ကြီးနဲ့ တော့ ထုနဲ့ ။ ကိုရင်နဲ့မှော်ဆြာငိုနေဦးမယ်
မစ္စတာ ဘင်း ဆိုဖာဆက်တီဝယ်ပြီးသူ့ကားလေးကိုအပေါ်ကတက်မောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမြင်ယောင်မိတယ်။
ခုန ကဘဲ CNN ကြည့်မိတယ် .. Black Friday ၀ိုင်း သမ နေကြတာ .လုကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြ၊ ငရုပ်ကောင်း Spary နဲ့ ပက်ကြ နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေတယ် ။ သူကြီးတော့ မပါဘူး မဟုတ်လား ..
ရောင်းအား ကလဲ ဘီလျံနဲ့ ချီသွားတာတော့ အားကျ စရာ ကြီး ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘလက်ဖရိုင်းဒေးက.. တော်တော်ရောင်းရတာကိုး…
ငွေတွေလည်ပါတ်တော့.. အလုပ်တွေလည်ပါတ်ပြီး.. တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတက်တာပါ..။
လူတွေအိမ်မှာထိုင်..တရားစခန်းတွေဝင်.. ငွေတွေမသုံးကြရင်.. အလုပ်အကိုင်တွေလည်း.. ခန်းခြောက်ပါတယ်..။
အလုပ်တွေမရှိတော့.. စီးပွားရေးနဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ ကျပါတယ်..။
ကျတော့.. နောင်ဘ၀ကောင်းဖို့ရည်မှန်းပြီး.. တရားစခန်းဝင်ပါတယ်..။
ဂျာအေးကို သူ့အမေရိုက်ပါလို့၊ မှောင်မိုက်မှာငို။ ကိုလူပျိုထရံပေါက်က၊ ခြေထောက်ကိုဆွဲ၊ တွဲလွဲ။
တွဲလွဲရယ်နေပါဦး၊ မိုးတောင်ကချုန်း၊ မုန့်လုံး။
မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ်ပါလို့၊ ကြာကလပ်နဲ့ ဆွမ်းတော်တင်၊ ပလ္လင်ပေါ်ကမျောက်ကလေး၊ ဆင်းတဲ့လို့ပြေး၊ ဂျာအေး။
ဂျာအေးကို သူ့အမေရိုက်ပါလို့၊ မှောင်မိုက်မှာငို။ ကိုလူပျိုထရံပေါက်က၊ ခြေထောက်ကိုဆွဲ…တွဲလွဲ။
တွဲလွဲရယ်နေပါဦး၊ မိုးတောင်ကချုန်း၊ မုန့်လုံး။ ……….၊
များများသုံး.. များများရှာ.. လူ့ဘ၀အရသာ ရသလောက်အပြည့်ခံစားပါ..။
U.S. Weekend Holiday Sales Raise Hopes
By DANA MATTIOLI And STU WOO
Retailers were cheered that their mix of deep discounts, early openings and website investment producedastrong start to the holiday season. Now, they’re plotting more price cuts to keep wary consumers interested for the rest of the key retailing period.
Sales on Black Friday—the big shopping day after Thanksgiving—rose 6.6% fromayear ago, according to retail-data and consulting firm ShopperTrak, which uses equipment installed in stores to measure traffic. That compares with an anemic 0.3% gain in 2010. Sales for the four days beginning with Thanksgiving grew 16.4%, according to the National Retail Federation, which surveyed 3,826 people.
The NRF estimated that consumers spent an average of $398.62 on Black Friday weekend, up 9.1% from last year. Of that, $150.53, or 38%, came from online sales.
“ငွေတွေလည်ပါတ်တော့.. အလုပ်တွေလည်ပါတ်ပြီး.. တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတက်တာပါ..။
သူကြီးက ကျွန်မတရားစခန်းဝင်တာကို စောင်းပြောနေတာများလားလို့ …
မပူပါနဲ့သူကြီးရယ် … ဗမာတွေ တရားစခန်းဝင်ရမှာ သေအောင်ကြောက်ကြပါတယ် … လူဦးရေ တစ်သန်းလောက်ရှိတဲ့ ရန်ကုန်မှာ လူတစ်ထောင်တောင် ရိပ်သာမှာ မရှိကြပါဘူး …
လက်ရှိတကယ်ဖြစ်နေတာက သိပ်လိုချင်စိတ်များလာရင် ခိုး ဆိုး လု ယက်မှုတွေ ပိုများလာတော့တာပဲ …
အမှန်တော့.. အင်မတန်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ.. ပညာအဆင့်အတန်းမြင့်သူတဦး.. တရားစခန်းဝင်သွားတာမျိုးကို.. နှမြောမိတယ်…။
အဲဒီအချိန်ကို.. တခြား ဗော်လန်တီယာအလုပ်တွေ.. လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အေ၇း မပေးထားတဲ့..စံနစ်ကိုလည်း..အားမလိုအားမရ.. ဖြစ်မိတာပါ…။
ဒါပေမဲ့.. 30000 foot view အမြင်နဲ့ဆိုရင်.. ဒါက.. မဖြစ်သင့်တာအမှန်ပဲ..။
နိုင်ငံေ၇းခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာ.. လူတွေအရည်အချင်းအလိုက်.. တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုညှစ်ချပေးဆပ်စေရမလည်း ကြည့်နေရတာ…။
ဒီလိုလူတွေကို… တရားစခန်းဝင်ဖြစ်သွားအောင်.. အခွင့်အေ၇း..မပေးစေသင့်ဘူး…။
ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကို.. ဥပဒေပြုသူတွေကို.. ပေးချင်တာပါ…။
သင်္ကြန်လိုရက်မျိုးမှာ.. အင်မတန်တက်ကြွတဲ့..လူငယ်တွေ.. ငွေတွေလည်ပတ်သွားအောင်.. မသုံးဖြုန်းပဲ.. တရားစခန်းဝင်ပစ်တာမျိုးကိုတော့.. မကြိုက်တာအမှန်ပဲ..။
တယောက်ဝင်ရင်.. တယောက်လုပ်အား ဆုံးတယ်ထင်မိတာပဲ..။
သဂျီး သံရည်ကျိုပူပူလေး နဲ့ သံတုံးပူပူလေး သွားစားပါလား။
လူ့ပြည်ရောက်လာမှ စားလာတဲ့ သံတုံးတွေ သံရည်တွေ ပြန်အန်ထုတ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်လေ ပိုပြီးတောင် ကြီးပွားအုန်းမယ်။
အန်တီဝေ့ကို ဖမ်းချုပ်ပြီး သဂျီးအမိန့်နဲ့ ယောက်ျားပေးစားကွာ…။ ကိုပုရေ ကျနော့်အတွက် အောက်လမ်းကနေ ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ စိတ်ချရတဲ့ လမ်းကြောင်းလေး စုံစမ်းပေးပါအုံး….။
တားတားတို့ ဘိရုမာဒွေက ပိုက်ပိုက်လေးချိရင်
ရွှေ ပဲဝယ်စုကြဒါဂိုး ….ရေခဲသေတ္တာတလုံး နှစ်၂၀လောက်သုံးကြတယ်
အံ့ရော …. ခွာလထီအော့်ဖ် လိုက်ဖ် မှာ ဘဲလန့်စ်
အိမ်မှာတောင် အဲ့လို အသုံးတွေမညီတာ …
များများရှာ များများသုံး ဒါတော့ ထောက်ခံတယ်
(အဲ့လာမှမဟုတ်ရင် မားကတ်တင်းသမား ထမင်းငတ်မှာပေါ့)
လိုချင်စိတ်များပီး ၆လုပ်ကျ မလုပ်ချင်ဘဲ
မန်ဒိုင်ဂျီး ၃ရပ်နဲ့ တားတား တို့ရဲ့
စတုတ္ထမန်ဒိုင် ကြီးတွေ က ပီသူလူဒု
တရပ်လုံးကို စောင့်ခြောက် တွားမယ်လို့
ဒါနဲ့ သဂျီး အ၀ီဇိ အမြန်ရောက် ကွန်းမန့်
ပေးနည်း သင်တန်းဖွင့်နေတယ် ဆိုဘဲ …ဟဲဟဲ…
သဂျီး …သမ်ဒဂျီး ဖြစ်ရင် သင်္ကြန် မှာ တရားစခန်း မဖွင့်ရ
အသက် ၆၀အောက် အကုန် ရေကစားရမည် ဆိုတဲ့ မာရှယ်လောများ ထုတ်မလားမသိ …..
သင်္ကြန် ငွေလည်ပါတ်မှု ဆိုလို့ .ဘာရောင်းရဒယ် ထင်လို့လဲသဂျီးရဲ့အရက်ဗျ အရက် ….
ဘလူးလေဘယ်ကစပြီး ဘိရုမာရမ် အလယ် ချက်အရက်အဆုံး အဲ့သည့်အချိန်ဆို ပစ္စည်းပြတ်တယ်ခည…အဲ့လောက်ရောင်းအားကောင်းတယ်….. အဲ့သည့်အချိန်ဆိုလုံးဝselling orientationပဲ ….
channel တွေမှာဆို ၀ယ်သူကမျက်နှာအောက်ချထားရတယ်..ကိုတာစနစ်ကလေးနဲ့ ဘယ်လောက်တော့ ပေးပါနော် ဆိုပြီး
သည်တော့ သင်္ကြန်နားနီးရင် အရက် ပိုသွင်း… ပိုထုတ်လုပ် ရတယ်ခည …ဒါတောင် လှောင်တဲ့လူ ကစားတဲ့လူတွေ ရှိသေး ……
တရားစခန်းသွားမယ့်လူတွေမသွားဘဲ မဏ္ဏပ်ပေါ်တက်ပီး….”ချမ်းလို့ဘာ ချမ်းလို့ဘာ …” ဆိုပီး
ရှက်ကီထိုင်ထုနေကြရင် ….အောင်မငီး …. မတွေးဝံ့စရာဂျီး
marketer တယောက်လုပ်တဲ့ survey မှာ ကြည့်ဖူးတယ် population အရ
အချိုးချရင် အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကျုပ်တို့ဗမာတွေရွှေတံဆိပ် စွပ်ခူးတယ်တဲ့ခည ……
(အင်းပေါ့ လူတွေ မွဲတော့ ညစ်ရင် ဖြေစရာ ဒါနဲ့ အဟွာဘဲ ရှိဒါဂိုး….)
သည်တော့ သည်စကား အမေလိကားမှာဘဲပြောပါ သဂျီးရယ်…
ဘာဝနာအသင်း ကို ယမကာပုလင်းနဲ့ ဖျားယောင်းသလို ဖစ်နေလို့ဘာ..
ရွာဦးဘုန်းကြီး တွေ့ရင် သဂျီးကို ကြိမ်နဲ့ဆော်လိမ့်မယ်…
(သည်ကွန်းမန့်တွေလည်း ရွာလာလာသတင်းသုံးတဲ့ ဦးဇင်းဆန်နီ မမြင်စေနဲ့ဦး)
သည်တော့ တရားသမားဒွေလည်း တရားအလုပ်မပျက်အောင်
ငွေလည်ပါတ်အား ဖြုန်းအားလည်း မကျအောင်
သင်္ကြန်ဆို ပေါက်-ပေ-လူးဝ-ဂီ-တီ-မှော်-စည် ရွာကာလသားတသိုက်က
သဂျီးဒဂိုးနဲ့ ၂ဆတိုး သောက်ပေးပါ့မယ် …
(တရားစခန်းဝင်မယ့် လူတွေဆီက ရံပုံငွေကောက်ခံပြီး..)
အလကား စတာပါဗျာ …ဒါလေးကတော့ အတည်ပါ
ဆြာသမားတယောက် ရေးထားတာလေး ပြန်မျှလိုက်တာ
At one end of the continuum there’s theft & robbery. at the other end, there’s charity.
In the middle, there’s marketing – facilitating mutually beneficial exchanges.
Some businesses sway towards robbery and theft and some towards charity.
But, without businesses, we’ll be sitting on the ground naked and hungry.
သင်္ကြန်မှာ လူတွေ တရားစခန်း ၀င်နေတာနဲ့ မသုံးဘူး မထင်နဲ့..
တရားစခန်း ၀င်တာနဲ့ ပါးစပ်တွေ မစားကြဘူး များ ထင်နေလား မသိဘူး။ ရိပ်သာက နေ့တိုင်း ထမင်းကျွှေးတယ်။ ရိပ်သာဝင်ရင် အဖြူဝတ်ရတယ်။ အဖြူရောင် အကျီတွေ ပိုပြီး ချုပ်ရောင်းရတယ်။ ဈေးထဲမှာ ထမိန် တထည်ချင်း ချုပ်တဲ့ လူတွေကလည်း ယောဂီ ထမိန်တွေ ပိုချုပ်ရတယ်။
တရားစခန်းကို အအေးလှူတဲ့လူကလည်း သိန်းနဲ့ ချီ အကုန်ခံပြီး အအေးလှူတယ်။ အဲဒီ အတွက် အအေးထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ တကွ လုပ်သားတွေ အလုပ်များများ ရတယ်။
စားသောက်ကုန် လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတွေ သွင်းတဲ့လူတွေက သင်္ကြန်နားနီးရင် ပိုသွင်းရတယ်။
လူတွေ အပြင်မထွက်တာပဲ ရှိတယ် နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာရှိရှိ စတုဒီသာ ပစ္စည်းတွေ ရောင်းအားတက်တယ်။ အုန်းသီး ခြစ်သည် ညှစ်သည်တို့ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်တဲ့ အချိန်ပေါ့.. ရေခဲ ရောင်းအားတက်တယ်။
လူတွေ သင်္ကြန်တွင်းမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပြီး သေတဲ့လူတွေ နာကျင်မှုတွေ(သွေးထွက်သံယို) ရှိတဲ့ လူတွေ နေ့တိုင်းရှိတယ်။ ရန်ပွဲတွေ နေ့တိုင်းရှိတယ်။ ရေနစ်သေတဲ့လူတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ လူတိုင်းသာ အိမ်အပြင်ထွက်ကြမယ် ဆိုရင်တော့ သေတဲ့ လူတွေပိုများလိမ့်မယ်။ ဒီတော့.. သဂျီးက မြန်မာပြည်က လူတွေကို သင်္ကြန် အကြောင်းပြပြီး အိမ်အပြင်ထွက်ခိုင်းတာ လူတွေကို သေစေချင် ထိခိုက်နာကျင်စေလို့ ပြောတာပါဗျို့…… မြန်မာလူမျိုးတွေကို ချစ်ရင် သဂျီးရဲ့ အယူအဆတွေကို ဆန့်ကျင်ကြပါဗျို့…
HP Pavilion, $349.99: Model: g4-1229dx. 14-inch LED-backlit display, Intel dual-core “Sandy Bridge” Pentium B950 processor, 4GB memory, 500GB hard drive, and optical drive.
Toshiba – Satellite Laptop, $379.99: Model: C655-S5305. 15.6″ LED-backlit display, Intel Sandy Bridge Core i3-2330M processor (2.2GHz), 4GB memory, 320GB hard drive, and optical drive.
Among other deals, Amazon is offeringaSony VAIO EJ2 Series (VPCEJ28FX/B) 17.3-inch laptop for $691.83, about $108 off the regular price. That model includesa17.3 1600×900 display, Intel Core i5 processor (2.4GHz), 4GB memory, 640GB hard drive, and Blu-ray player.
At Best Buy, don’t expect to find many $199 BlackBerry PlayBook tablets, however. Most, if not all, of those have sold out over the last week or so at the national retailer.